Farmaajo & Rooble oo wax ka ogaa heshiiska shidaalka | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo & Rooble oo wax ka ogaa heshiiska shidaalka
Xubno ka tirsan, shirkadda Coastline Exploration Limited, oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka, oo wareysi gaar ah siiyay warbaahin maxalli ah, ayaa ku daaday in Farmaajo iyo Rooble, wax ka ogaayeen heshiiska Shidaalka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xogo hor leh ayaa ka soo baxaya saxiixii shidaalka ee 15-kii bishii hore ka dhacay London, kaas oo Coastline Exploration Limited, loogu saxiiyay heshiis wax soo saar wadaag todobo xirmood ah.
Wasiirka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta, Cabdirashiid Maxamed Axmed, oo heshiiskaas qalinka ku duugay, ayaa hore u sheegay in Madaxweynihii hore, M.C Farmaajo, wax ka ogaa heshiiska Coastline.
Hayeeshee, Farmaajo iyo RW Rooble, ayaa labaduba iska fogeeyay, wax ka ogaanshaha heshiiskaas, halka, Hantidhawraha Guud iyo Xeer ilaaliyaha Qaranku, caddeeyeen in heshiisku yahay mid sharci-darro ah.
Sidaas oo ay tahay, warbaahinta maxalliga ah ee Goobjoog News, ayaa tabisay xog hor leh, oo ku aaddan in Farmaajo iyo Rooble, wax ka ogaayeen saxiixa heshiiska dhex maray shirkadda Coastal iyo Wasiirka Batroolka.
Warbaahintaan, oo soo xiganeysa ilo ka tirsan Soma Oil and Gas oo fadhigeedu yahay Mareykanka, ayaa sheegtay in isha u warrantay ay ku doodday in Rooble iyo Farmaajo, ku qanacsanaayeen heshiiska, soona bandhigi doonaan.
Coastal Exploration waxaa ay sheegayaan in lama filaan ku noqotay, jahowareer u arkaan hadallada Ra’isul Wasaare Maxamed Rooble iyo Madaxweyne hore Farmaajo, oo labadaba ku qanacsanaa heshiiska iyo habraacyadiisa. Ayay tiri Goobjoog.
IMF, Bankiga Adduunka, iyo Guddiyo maaliyadeed, ayaa hore uga digay in Soomaaliya xilligaan gasho heshiisyo shidaal, maadaama sharciyada taabanaya dhaqaalaha iyo dakhliga Soomaaliya aan weli la hor geyn Baarlamanka.
Halka aan wali la meel-marin Sharciga Badbaadinta Deegaanka, (Environmental protection law) oo la’aantiis, hawl baaris iyo soo-saar shidaal aysan suura-gal ahayn, isla-markaana ay sharciyo kala duwan oo arrinkaan la xariira u xayiran yihiin BJFS.
Wasiirka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta, Cabdirashiid Maxamed Axmed, ayaan wali la kulmin, wax xil-ka qaadis ah iyo dacwo ka dhan ah heshiiska uu saxiixay, taas oo sii kordhineysa shakiga laga qabo in Rooble, wax ka ogaa saxiixa.
Cabdirashiid, wuxuu sheegay, in Coastline, looga fadhiyo in ay 30 cisho gudahood 7 milyan ku shubto Bangiga dhexe, hayeeshee, lacagta lagu qaatay [Signing bonus] ayaa ah $14 milyan, wuxuuna qariyay halka ay martay 7-bada milyan ee maqan.
Siyaasiyiinta Soomaalya, ayaa la fahansan yahay in doonistooda xooleysiga iyo boobka hantida dad-weynaha ay kaga muhiimsan tahay, howlaha loo igmaday iyo masiirka dalka, waana sababta dalka ka dhigtay waddanka ugu musuqa badan adduunka.
Afar sano oo uu ahaa MW dalka iyo hal sano oo sharci-darro uu ku joogo Madaxtooyada, Farmaajo, kaliya hal mar ayuu sameeyay xisaab-xir, ay ka maqan tahay ku dhawaad 50 milyan oo dollar, taas oo muujineysa boobka uu ku hayo xoolaha umadda.